श्रीमान्–श्रीमतीबीच किन झगडा हुन्छ ? – मोफसल खबर
श्रीमान्–श्रीमतीबीच किन झगडा हुन्छ ?
झगडा भएपछि केही क्षण बोलचाल हुनु सामान्य होला । तर, लामो समय बोल्दै नबोल्नु उचित होइन् । यसले गर्दा लामो समयसम्म तपाईंहरु तनावग्रस्त रहनुहुन्छ । मनमा अनेक कुरा खेल्न थाल्छ ।
मुख्यमन्त्री राईको २८ वर्ष कान्छीसँग विवाह हुँदै